नयाँ शिक्षण कला : सिकाइमा यौटा नयाँ आयाम | EduKhabar
नयाँ शिक्षण कला : सिकाइमा यौटा नयाँ आयाम
प्रा. डा. मनप्रसाद वाग्ले
- प्रा. डा. मनप्रसाद वाग्ले, शैक्षिक मुद्धा र नीति निर्माणका लागि आवश्यक वकालतमा सुझवुझ साथ विचार प्रवाह र खरो टिप्पणी गर्ने शिक्षाविद् हुन् । उनी सामाजिक सञ्जाल मार्फत् पनि आफ्ना विचार र शैक्षिक मुद्धाहरुलाई सार्वजनिक गरिरहेका हुन्छन् । यस अघि फेसबुक मार्फत् सार्वजनिक उनको थेसिस लेख्ने कला निकै रुचाईएको थियो । जुन एडुखबरले श्रृखलावद्ध रुपमा साभार गरेको थियो । वाग्लेले यस पटक नयाँ शिक्षण कला (पेडागोजी) का बारेमा बहस सार्वजनिक गरेका छन् :
New Pedagogy (1)
Michael Fullan र Maria Langworthy द्वारा तयार पारिएको “A Rich Seam” नामक प्रतिवेदनका बारेमा Sir Michael Barber ले लेख्नुभएको प्राक्कथनमा आधारित यो पोस्ट (New Pedagogy 1-3) सवैका लागि फाइदा होस् भन्ने हेतुले नेपालीमा अर्थ्याउने यौटा प्रयास मात्र हो । त्यसपछिका अंकहरुमा new pedagogy लाई विस्तृतिकरण गर्ने योजना छ ।
अहिलेको डिजिटल क्रान्तिले हाम्रो जीवन, हाम्रा क्रियाकलाप र हाम्रै संस्थाहरु रूपान्तरण भएका छन् । उदाहरणको लागि मोबाइल फोन बाटै तपाईं बैंकको रकम स्थानान्तरण गर्न, बील तिर्न र अन्य आर्थिक कारोवार गर्न सक्नुहुन्छ । अब तपाईं आफ्नो खल्तीमा राखेको एप बाट मुटुको चाल नाप्न सक्नुहुन्छ । त्यस्तै चालक विनाको गाडी सडकमा गुडेको पनि देख्न सक्नुहुन्छ ।
यो विकसित मुलुकवाट शुरु भएको भएता पनि पत्तै नपाई विकासोन्मुख मुलुकमा समेत समाज रूपान्तरणको माध्यम बनिसकेको छ । इन्टरनेट विना जीवन असहज हुन थालिसकेको छ । केटाकेटीले खेल्ने साधनको रूपमा होस् ,वा सूचनाको पहूँचको माध्यमको रूपमा होस्, वा अन्तरक्रियाको माध्यम होस् वा ठुला कम्पनीका बहुदेशीय महत्वपूर्ण बैठक होस् सब रूपान्तरण भएका छन् २१औ शताब्दीको डिजिटल क्रान्तिले । तर दुखको कुरा कति विद्यालय र विश्वविद्यालय यसैको उपयोग वाट रूपान्तरित भएका छन् त ?
हामीले चाहेर पनि किन यो हुन सकिरहेको छैन ? र हामी उही पुरानो भाषण कलामै विद्यार्थीहरुलाई दीक्षित गर्ने काम गर्दैछौं ? किन शिक्षकलाई अझै ज्ञानदाता र विद्यार्थीलाई त्यसको प्रापक मान्दैछौँ ?
Rosalind Picard र उनका साथीहरुले अमेरिकाको म्यासाचुसेत्ट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीको प्रयोगशालामा गरेका अध्ययनले के पत्ता लगाएको छ भने शिक्षकले लेक्चर मात्र दिंदा विद्यार्थीको दिमागी क्रियाकलाप करिव शून्य नै हुन्छ ।अझ उनीहरु निदाएको अवस्था भन्दा पनि कम्जोर हुन्छ । हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसर Eric Mazur को अनुभव पनि त्यस्तै छ । उनि भन्छन लेक्चरले दिमागलाई समथर गराउँछ कुनै प्रगति हुँदैन । उनी अझ अगाडि थप्छन “Students are more asleep during lectures than when they are in bed!” त्यसैले नयाँ शिक्षणको निकै खाँचो भैसकेको छ ।
New pedagogy (2)
को विश्वविद्यालय जान योग्य को जान अयोग्य ? को प्रोफेसनल को नन -प्रोफेसनल ? कसले प्राविधिक काम गर्ने कसले नगर्ने ? कसले कति पढ्यो भने कुन तहको काम पाउँछ ? जस्ता कुरामा २०सौ सताब्दी अल्झियो । जसका कारण सिकाइको केन्द्र भनेको स्कूल, कलेज र विश्वविद्यालय नै मुख्य ठानिए । अनि विश्वविद्यालयवाट डिग्री लिएकाहरुनै सर्वत्र हावी हुने र सिकाइका अन्य वैकल्पिक मार्ग कम्जोर बन्न पुग्यो । अब २१औ सताब्दी यो भन्दा पृथक धारणा राख्दछ । सामाजिक, आर्थिक र नैतिक हिसावले नितान्त पृथक । अवको जमानामा मान्छेले भन्दा मेसीनले बढी काम गर्ने भएको छ भलै यसैका कारण धेरै यूवाले रोजगारी नपाएको अवस्था किन नहोस्; यो यथार्थ हो र यसलाई नस्वीकारी धर छैन ।
२१औ सताब्दीको सिकाइ शैक्षिक संस्थाको ४ पर्खाल भित्र मात्र सिमित छैन । यो व्यापक छ र जहाँ पनि सम्भव छ । अव छनिएकाहरुले मात्र हैन प्रत्येक मान्छेले पढ्न पाउने वातावरण हुनुपर्छ, प्रत्येकले आफ्नो करिअर बनाउन सक्ने हुनुपर्छ । एकले अर्कोवाट सिक्ने क्रम शुरु भएको छ र यो अगाडि बढ्दैछ । शैक्षिक संस्थाको बढ्दो क्षमता र सिक्ने प्रवृत्तिले गर्दा एउटा संस्था र अर्को संस्थाविच सिकाइ आदानप्रदानको सम्भावना पनि बढेर गएको छ ।
यी सव भूमण्डलीकरणका सम्भावित उपलब्धिका सूचक हुन् । त्यसैले नयाँ शिक्षण अव केवल कक्षाकोठामा मात्र सिमित छैन यो बाहिर संसारमा पुगिसकेको छ । त्यस्तै शिक्षक वा शैक्षिक प्रणालीका अगुवाहरुले पनि आफ्ना समकक्षीवाट जति धेरै र छिटो सिक्न सक्छन त्यति किताव पढेर वा कक्षामा बसेर सिक्न सक्दैनन् । यिनै कुरालाई ध्यानमा राखेर नयाँ शिक्षण तर्फ उन्मुख हुने हो भने निकै ठूलो उपलब्धि हात पार्न सकिन्छ ।
New pedagogy (3)
अवको शिक्षा भनेको लेख्न र पढ्न मात्र जान्ने साक्षर भन्दा निकै माथि सोच्नु पर्ने भैसकेको छ । समस्या समाधान, सिर्जनात्मक प्रतिभाको प्रस्फुटन, सिकाई समूह निर्माण, विचारको मन्थन, सह-कार्य जस्ता अति आवश्यक सीपहरु अव पनि विद्यार्थीले नपाउने हो भने सिकाइको अर्थ रहन्न । विद्यार्थी-विद्यार्थी विच, विद्यार्थी-शिक्षक विच र शिक्षक-शिक्षक विच अव सिकाइ सहभागिता अनिवार्य भै सकेको छ । यसले मात्र शिक्षक र विद्यार्थीलाई भित्रैदेखि सिक्ने र सिकाउने समान उत्प्रेरणा प्रदान गर्दछ । एकांगी पढाईले २१ औं शताब्दिको भूमण्डलीकरणको माग र आवश्यकता धान्न सक्दैन । अरुसंगको सहकार्यमा प्रत्येक विद्यार्थीलाई आफ्नो सिकाइको नेतृत्व आफैं लिने अवसर प्रदान गर्नु नयाँ शिक्षण (New Pedagogy) को मूल मर्म हो । अनि मात्र शिक्षालाई जगत संग जोड्न सकिन्छ र सिकाइको अभिवृद्धि हुन्छ । यस्तो नयाँ सिकाइ खासगरी वास्तविक संसार र समस्या समाधान गर्ने सीपमा आधारित हुन्छन् जसलाई डिजिटल प्रविधिमा भएको प्रवर्तनले ह्वात्तै अगाडि बढाउँछ । नयाँ शिक्षणको यो क्रम पियाजे, भिगोत्सकी र अन्य सिद्धान्तविदकै अवाधारणामा टेकेर अगाडि बढ्दैछ र सिकाइमा यौटा नयाँ आयाम थप्दैछ ।
नयाँ शिक्षण कुनै प्रयोगशाला वा कुनै विश्वविद्यालयमा परिक्षण गरेर नतिजा सार्वजनिक भएको विषय हैन । यो त प्रत्यक्ष कक्षाकोठा भित्र नै विकास गरिएको यौटा नविन प्रयोग हो (Frontline). बिभिन्न मुलुकको अनुभवको आधारमा यो नयाँ शिक्षण विद्यार्थीको सिकाइ प्रतिको नैराश्यपन र अरुचि घटाउन तथा आफ्नो पेशाप्रति सकारात्मक सोच राख्न नसक्ने शिक्षकका लागि सकारात्मक उर्जा प्रदान गर्न अगाडि बढेको छ ।
यस्ता कुरामा देशको शिक्षा प्रणालीले ध्यान दिनु पर्छ र ज्ञान सर्वसुलभ हुनुपर्दछ (ubiquitous)/ ज्ञान नियन्त्रण गर्ने बस्तु होइन र राज्यले यस्तो गर्नु पनि हुँदैन ।
खासगरी अहिलेको २१ औं शताब्दिमा इन्टरनेटको पहूँच अल्प विकसित मुलुकमा समेत भएकोले शिक्षण सिकाई लाई रूपान्तरण गर्न प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्छ, गर्न सकिन्छ । यसैले शैक्षिक प्रणालिमा सुधार गरेर ज्ञान, शिक्षण कला, र प्रविधिलाई (knowledge, pedagogy, and technology) एकीकृत गर्न सकिन्छ र चमत्कारिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया देखि विद्यार्थीको मूल्यांकन नतिजा सम्मको यात्रा (Pedagogy) हो । यदि new pedagogy को अवधारणा अगाडि बढाउने हो भने उही खर्चमा सिकाइको मात्रा दोब्बर बनाउन सकिन्छ ।
Sharada Lamsal11 months ago
Sir Namaskar I really appreciate your view which is related to our teaching and learning methodology.Science and technology has been expanding all over the world not only developed country but also developing country. But our teaching and learning activities as usual. It must be change like your view. Thank you Sharada Lamsal
शिक्षा ऐन संशोधन : केही प्रश्न केही उत्तर
शिक्षा सुधारका तीन सूत्र : नेतृत्वदायी जिशिअ, योग्य प्रअ र लगनशील शिक्षक